Tari-dalana DigiActive ho an’ny fikatrohana amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Febroary 2019 4:18 GMT
Vao avy namoaka ny The DigiActive Guide to Twitter for Activism ny DigiActive, fikambanana natokana hanampiana ireo mpikatroka eny ifotony manerantany mba hampiasa teknolojia nomerika. Taorian'ny fihetsiketsehana vao haingana tao Moldavia, tena malaza tsy mbola nisy toy izany ny lanjan'ny Twitter amin'ny maha fitaovana ho an'ny fikatrohana nomerika azy. Ankoatra ny fitondrana fanentanana lehibe ao amin'izany fitaovana izany, nampiseho ny tsy fahatakarana ny lanjan'ny Twitter ho an'ny fikatrohana ny tabataba manodidina an'i Moldavia ary na dia namaly mafy aza ireo realista (mpanaiky ny zava-misy), dia tsy nisy loharanm-baovao tokana izay namaritra mazava ny fahafahan'ny mpikatroka mampiasa ny Twitter. Manantena ny DigiActive fa hameno izany banga izany ity tari-dalana ity.
Tsindrio ny sary rakotra raha hitroka ny tari-dalana (endrika PDF)
Manome vaovao marobe momba ny fikatrohana amin'ny Twitter ny tari-dalana. Manomboka min'ny fampahafantarana ny sehatra (p. 5) sy ny terminôlôjiany (teny teknika ao aminy) izany (p. 6) ary mampiseho ny fomba dimy fampiasana ny Twitter ho an'ireo mpikatroka, izay samy voaravaky ny tranga fanadihadiana (p. 6-11). Mampiseho paikady isan'ambaratonga amin'ny fampiasana ny Twitter ho an'ny fanovana ara-politika sy ara-tsosialy avy eo ny tari-dalana (p. 12) miaraka amin'ny lisitry ny azo atao sy ny tsy azo atao (p. 14) ho an'ireo mpanao fanentanana. Faranan'ny tari-dalana amin'ny loharanom-baovao fanampiny ho an'ny mpisera Twitter, tahaka ny fampiharana manampy anao hampiasa Twitter (p. 16), vakiteny fanampiny (p. 20), ary koa safidy hafa ankoatra ny Twitter (p. 18).
Nosoratan'i Andreas Jungherr, master amin'ny siansa ara-politika tao amin'ny Oniversiten'i Mainz ao Alemaina ny tari-dalana ary nodinihana indray sy nohatsarain'ireo manam-pahaizana, mpikatroka sy ny ekipan'ny DigiActive mba ho vakianao finaritra. Omeo ny hevitrao azafady ao amin'ny takelaka fanehoan-kevitra etsy ambany.
(niarahana nanoratra, nasiana fanovana bitika, avy amin'ny DigiActive.org)